Tandremo ny Internet Malaza | Martech Zone
Zoma, Septambra 25, 2009 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Herinandro vitsivitsy lasa izay dia naharay mailaka avy amina vehivavy manontany momba ny ahy aho Boky momba ny bilaogy sy SEO. Somary mailaka nampalahelo ilay izy - namaky vehivavy iray naniry hividianana ny e-Book dia nandany vola iray taonina tao amin'ilay tranonkala niresaka momba izany ary tsy nahazo valiny taloha. Mampihomehy, ilay lahatsoratra novakiany dia iray izay nandaniako vola iray taonina napetraka tao.
The Malaza amin'ny Internet Ny tranonkalan'ny olona dia nanana isa nahavariana ary lisitry ny mpanao dokambarotra mahavariana kokoa aza. Nilaza izy ireo fa maherin'ny 50,000 ny mpamaky isan'andro eo anelanelan'ny loharano fizarana azy ireo. Tsara ny mpanatrika hahatratra! Ary ny mpijery dia kiraro ho an'ny vokariko. Teo daholo izany: eyeballs sy ny mpihaino kendrena. Sa izany?
Iray volana taorian'ny nihazakazahan'ny lahatsoratra ary tsy manana akory aho 200 mpitsidika avy amin'ny tranokala. Izay ny mpitsidika… tsy ny fiovam-po… ny mpitsidika fotsiny. Amin'ireo mpitsidika roan-jato, tsy nisy olona na iray aza nividy ilay e-Book. Nahita ny tenako tao anatin'ny olana mitovy amin'ilay vehivavy nanoratra ahy aho. Nitaraina izy fa nandany vola be ary tsy nahazo valiny akory tamin'ny torohevitra nomeny karama fa avy amin'ny tranonkala resahina. Avy amina olona ilay tranonkala Malaza amin'ny Internet.
Sary tao amin'ny bilaogin'i Amit Gupta
Ny teoria amin'ny Internet malaza
Ka, ao an-tsaina izany, sy ny fanangonana ny Malaza amin'ny Internet olona fantatro na niara-niasa tamiko, ity ny teôliko:
Malaza amin'ny Internet mahay zavatra iray ny olona… manao ny tenany Malaza amin'ny Internet.
Maro amin'izy ireo no tsy miara-miasa amin'ny mpanjifa (ivelan'ireo te-hanakarama olona Malaza amin'ny Internet ary tsy manana fanantenana amin'ny valiny). Ny ankamaroan'izy ireo dia sahirana manandrana mitazona ny fisehoana fa be mpanaraka sy be saina kokoa noho isika rehetra izy ireo. Ny ankamaroan'izy ireo dia mailaka, marani-tsaina, manan-tsaina ary tompon'ny zavatra mazava. Maro amin'izy ireo no mifampiraharaha amin'ny boky. Ny sasany amin'izy ireo dia sahirana manitatra ny isa mba hitazomana ny fisehoany.
Fantatr'izy ireo fa ny fifindrana amin'ny asa mafy ary ny vokany dia lasa tsotra fotsiny Malaza amin'ny Internet fomba iray mora kokoa hahazoana vola. Nahoana? Satria mila ranom-boalobok'izy ireo izahay… te handehandeha izahay… tianay koa ny lalana mora.
Tsy mora anefa izany. Aza manantena ny hahazo valiny rehefa manipy vola amin'ny Malaza amin'ny Internet… Tadidio fotsiny fa manampy azy ireo hampalaza azy ireo ianao. (Ary tsy maninona koa izany!)
Momba an'ity bilaogy ity
Izay no antony mahaliana ahy tokoa ity bilaogy ity sy ireo bilaogera ao anaty sambo (miaraka amin'ny manaraka). Isika rehetra dia mpivarotra miasa isan'andro mba hanatsarana ny fahombiazan'ny mpanjifanay. Ny bilaogy no fitiavantsika fa tsy ny tombotsoantsika. Angamba indray andro any dia hisaraka isika ary ho Malaza amin'ny Internet. Raha izaho izany dia aza hadino ny manoratra momba ahy ary mitazona ahy ho tompon'andraikitra, na izany aza!
Raha ny momba ilay vehivavy dia nandefasako kopia Fitorahana bilaogy ho an'ny Dummies maimaimpoana ary nangataka azy handoa fotsiny raha nandray soa tamin'ny boky izy. Ho anao rehetra izany! Raha tsy mino ianao dia faly aho mandefa kopia ho anao!
Tags: fitorahana bilaogymitoraka bilaogy ho an'i seobilaogy orinasamalaza amin'ny Internet
Sep 26, 2009 amin'ny 3: 36 AM
Heveriko fa hoy ilay fitenenana hoe "izay rehetra mamirapiratra dia tsy volamena." Mahamenatra ny fisian'ny olona any izay tsy te-hiantoka ny vokatra / serivisiny an-tsakany sy an-davany.
Sep 28, 2009 amin'ny 8: 27 AM
Eny, mba andefaso amiko ny kopia 25 Dingana mankany amin'ny e-Book ho an'ny fahombiazana maimaim-poana, ary horaisiko amin'ny fepetra mitovy ihany izany.